The ike mbanye bụ a kọmputa data ụlọ ahịa. Site sistemụ na music na foto, na draịvụ ike nwere ihe nile data na usoro. Ya mere, ka a na draịvụ ike na-aga haywire pụtara ekwe omume nke adịkwa tọn bara uru data. Nke a na ọnwụ nwere ike-ọbụna ihe na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ọrụ adịghị nwere ndabere nke data na draịvụ ike. Isiokwu a aims on agbasa ụfọdụ mmata na ekele na Mac ike mbanye mgbake ngwaọrụ dị ka e nwere ọtụtụ ndị a maka Windows dabeere usoro ma nnọọ obere na-arụ ọrụ na Mac OS X.
Nke ihe nwere ike ịkpata data ọnwụ na draịvụ ike na Mac?
Data Loss na draịvụ ike na a Mac pụrụ irite site mgbanwe ihe. Mgbe ụfọdụ, ọ na-esighịkwa a software glitch dị ka na-atụghị anya okuku nke sistemụ ma ọ bụ mgbe mmelite. Mgbe ụfọdụ, data ọnwụ id ruru ka a ngwaike ọdịda, dị ka odida nke a ike mbanye onwe ya. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịgụnye mmadụ njehie ka ihichapụ data accidently ma ọ bụ formatting a ike mbanye accidently.
Top 5 mac data mgbake ngwaọrụ
Wondershare Data Recovery for Mac Bụ ngwá ọrụ nke nlaghachie nke furu efu data. Ngwá ọrụ a bụ-enye aka karịsịa dị ka ọ nwere agbatiri nkwado maka n'elu 550 faịlụ na ụdị na-eme ka ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume n'ihi na ọ na-atụ uche a faịlụ. Wondershare Data Recovery for Mac Na-elekọta nke faịlụ ehichapụ mmadụ na mberede ma ọ bụ n'ihi na formatting nakwa dị ka ndị na-furu ruru ka a virus ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ malfunction nke sistemụ. The software awade anọ mgbake ụdịdị na-: Ọkachamara Mode Iweghachite, Lost File Iweghachite, nkebi mgbake na Raw Iweghachite ọ bụla nwere ya ịtụnanya ike.
Uru: enye nile bụ isi nakwa dị ka nnukwu larịị functionalities ke otu ngwugwu
Cons: Ka na-a bit akarị
EaseUS Data Recovery Ọkachamara maka Mac
EaseUS Data Recovery Ọkachamara maka Mac bụ a ịba uru na-ahapụ ọrụ naghachi data ha Macs irrespective nke ihe kpatara na-eme ka ọnwụ. The software nwere ike naputa data na e furu efu esighịkwa mberede Ihichapụ, formatting, sistemụ malfunction, sistemụ okuku na kwalite nakwa dị ka virus-efe efe. The data nwere ike-achọ n'ụzọ abụọ dị iche ụdịdị na-arụpụta na-nkewa na ndabere nke ụzọ, oge nke na nhichapụ na ụdị. The pụta ga-previewed tupu ha na-n'ezie natara otú ahụ, ị ​​nwere ike mfe na-naanị data na ị chọrọ.
Uru: Mfe iji ọbụna n'ihi beginners
Cons: Ịnye ọnụahịa yiri ikenenke ka yiri ngwaahịa nwere ike ibudata for free
Prosoft Data Nnapụta 4
Na ụyọkọ ịtụnanya atụmatụ juru n'ọnụ ke otu software, Prosoft Data Nnapụta 4 bụ nzọpụta n'ihi na ndị niile Mac ọrụ na nwere na-ezighị ezi ike draịva. Data Nnapụta 4 bụghị nanị na-elekọta ụmụ software nsogbu ma na-ahapụ ọrụ ike a mmepụta oyiri nke niile data na draịvụ ike ma ọ bụrụ na mmebi bụ mmekwata N'ihi ya n'ibelata ohere nke data ọnwụ. Ọzọkwa, BootWell mma-enye ọrụ ike nke abụọ malite draịva naghachi faịlụ site na isi malite ike mbanye. The FileIQ mma bụ otu n'ime a ụdị na-ahapụ ndị software ịmụta ihe ọhụrụ faịlụ na ụdị dynamically.
Uru: FileIQ nwee ojiji nke Data Nnapụta 4 ke elu-ọgwụgwụ gburugburu dị ka software ụlọ
Cons: oké ọnụ mgbe tụnyere ndị ọzọ yiri software
DiskWarrior 5 bụ otu nnukwu data mgbake ịba uru na ọ bụghị naanị naputa data si a gwụsịrị mbanye ma na-emekwa ịgụ isiokwu gị mbanye na ego ma ọ bụrụ na ọ bụ na verge nke n'iyi. Ọzọkwa, akwụgo DiskWarrior 5 na-elekọta ezighị ezi ozi nyere site sistemụ na ndị nkịtị onye ọrụ nwere ike bụghị decrypt. Ọzọ atụmatụ na-agụnye ikike mmepụta oyiri niile data si gwụsịrị mbanye na a ọtọ ike mbanye na a na-enyocha kwa nke rụziri mbanye iji jide n'aka na ihe nile dị n'usoro. Na free oru nkwado. Alsoft awade ndakọrịta dị azụ dị ka OS X 10.5.8 maka Disk Warrior 5.
Uru: Ukwuu nso nke na-akwado OS X nsụgharị
Cons: nnọọ oké ọnụ
UndeleteMyFiles Pro bụ ihe dị mfe iji, isi data mgbake software na-enweghị na okomoko show. Ọ na-eme ihe ọ bụla faịlụ mgbake software ga-eme ma simplifies usoro. Ọ nwere File Nnapụta Ọkachamara nke na-eme ka ọ dị mfe ịhụ na naghachi ehichapụ faịlụ. Ndị ọzọ functionalities agụnye Media Naghachi, ehichapụ File Search, Mail Nnapụta na a Files Wiper na-ehichapụ niile enweghị isi faịlụ-adịgide adịgide. The kasị ukwuu uru na UndeleteMyFilesPro nwere na-enye ihe karịrị ndị ọzọ yiri softwares bụ na ọ bụ nnọọ free iji na-enweghị data ịgba mgbochi.
Uru: enye niile functionalities na ndị ọzọ yiri softwares nwere ike na-achọ ego maka, n'ihi na free
Cons:-enye isi functionalities, elu-larịị atụmatụ dị ka cloning adịghị
Iji Wondershare Data Recovery iji weghachite data on a Mac
Download na wụnye Wondershare Data Recovery software na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Ẹkedori Wondershare Data Iweghachite ozugbo echichi zuru ezu. Họrọ Iweghachite ọnọdụ dị ka gị mkpa.
Wondershare Data Recovery Ga ugbu a na-ajụ gị maka ebe ebe data pụrụ ịbụ na n'ihu gị ehichapụ / furu efu ya. Họrọ adabara nhọrọ si ndepụta nke nyere ndị ma ọ bụ nanị họrọ "m ike icheta" ma ọ bụrụ na ị maghị banyere ọnọdụ. Pịa "Ekem" n'ihu. Ị nwekwara ike họrọ "nwee miri Doppler" nhọrọ ka usoro ihe omume na-agba ọsọ miri n'ime draịvụ ike gị iji weghachite ọbụna raw data, ọ ga-ewe ogologo oge mezue Doppler karịa na nkịtị mode.
Pịa "iṅomi" na-ekwe ka software na-amalite faịlụ nlaghachie usoro. Ozugbo software meworo ya ọrụ, ị ga-enwe ike ihuchalu Ewepụtara faịlụ. Ị nwere ike wee họrọ ndị na ị chọrọ iji weghachi site na-ahọpụta ha na ịpị "Weghachi" nhọrọ.
> Resource> Mac> Top 5 Mac Draịvụ Iweghachite ngwaọrụ nke na-eweghachiri data on Mac OS X